Xavier Hernández oo ugu hanjabay Real inuu Kulanka El Clasico ka dhilin doono Hat-trick. - Caasimada Online
Home Warar Xavier Hernández oo ugu hanjabay Real inuu Kulanka El Clasico ka dhilin...
Xavier Hernández oo ugu hanjabay Real inuu Kulanka El Clasico ka dhilin doono Hat-trick.
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Barcelona Xavier Hernández i Creus ayaa sheegay inuu kulanka ay axada kooxdiisu kulan ka tirsan Primera Division ku wajahayaan kooxda Real Madrid uu ku riyooday inuu sedaxleey ka dhalin doono.
32 jirkaan ayaa koobab kula soo guuleystay kooxdiisa iyo xulkiisa qaranka, laakiin weli wuxuu sugayaa inuu hal kulan ka dhaliyo sedax gool [Hat-trick], wuxuuna fursadaas u arkaa inay tahay mid lagu xasuusan doono hadii uu sedax gool ka dhaliyo kulanka lagu magacaabo El Clasico.
“Ma waxaa jira wax aanan weli sameyn? Waa inaan dhaliyo sedaxleey [Hat-trick]…. Waan ku farxi lahaa hadii aan dhaliyo mar aan ka hor imaanayo Madrid,” ayuu Xavi ku yiri shir jaraa’id isagoo dhoola cadeynaaya.
“Run ahaantii kama fakereyno inaan guuleysano ama aan guul dareysano kulanka Real Madrid. Keliya waxaan diirada saareynaa guul, taasoo u wanaagsan hana qaadkeena sanadkan.”